ဖန် - ဝီကီပီးဒီးယား
ဝစ်ရှင်နရီ၊ အခမဲ့အဘိဓာန်တွင် ဖန် ကို ရှာဖွေကြည့်ရှုပါ။
ဖန် သည် လက်လုပ်ပစ္စည်း ဖြစ်ပြီး ပုံစံမျိုးစုံစွာ ပြုလုပ်နိုင်သည်။ များသောအားဖြင့် ထိုးဖောက်မြင်နိုင်ပြီး ကြွပ်ဆတ်သည်။ ဆေးရောင်စုံအားဖြင့်လည်း ပြုလုပ်ကြသည်။ ဖန်ကို သဲ အား အရည်ပျော်သည် အထိ အပူပေးခြင်းအားဖြင့် ရရှိသည်။ အရည်ပျော်နေစဉ် ပုံသွင်းပြီး အအေးခံရသည်။
ဖန် ကို များသောအားဖြင့် ပြူတင်းတံခါးများနှင့် ပုလင်းများ ပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။ ခရစ်ယာန် ဘုရားရှိခိုးကျောင်းများစွာ တွင် အရောင်ပါသော ဖန် ချပ်များကို ပြူတင်းတံခါးများ အတွက်သုံးကြသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် မှန်ဘီလူးများ ထုတ်လုပ်ရာတွင်လည်း သုံးကြသည်။
ဖန်ကို အရည်ဟု ဆိုကြသော ရှေးခေတ် ယုံကြည်ချက်မှာ ရှေးအဆောက်အဦးများရှိ ပြတင်းတံခါးများတွင် တပ်ဆင်ထားသော မှန်ချပ်များကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် အောက်ခြေထူ၍ အပေါ်ပိုင်းတွင် အနည်းငယ်ပါးလေ့ရှိသည်။ အမှန်မှာ မှန်ချပ်များ ပြုလုပ်စဉ်က ထုတ်လုပ်မှုနည်းစံနစ် မမှန်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။
A glass ball with coloured shapes in it.
Wikimedia Commons တွင် Glass နှင့် ပတ်သက်သော မီဒီယာ ရှိသည်။
Substances used in the Making of Colored Glass Archived 30 November 2005 at the Wayback Machine.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဖန်&oldid=623994" မှ ရယူရန်
၂၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၀၈:၅၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၀၈:၅၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။